Maitiro ekuisa Apache Server pane Fedora | Linux Vakapindwa muropa
Imwe yemabhenefiti ayo kugoverwa kweGnu / Linux kune mamwe masisitimu anoshanda ndiko kuita kwavo pakati pemabasa. Kugovera kweLinux kunogona kushanda senge inotonhorera desktop inoshanda system asi zvakare wedzera sevha mashandiro kwairi pasina kudzoreredza kana kukanganisa chero zvirongwa; kana kuishandura kuita multimedia centre uye sevha isina kubhadhara kana sendi rimwe chete uye mitsara miviri chete yekodhi inokwana. Tevere tinotsanangura maitiro ekuisa Apache Server, chirongwa chinozoshandura Fedora yedu kuita sevha system ine yakazara server mabasa.
Fedora inotibvumidza isu kuisa Apache Server yega kana pamwe pamwe nemamwe mapurogiramu eserura
Fedora inotibvumidza isu kuisa dziva rekushandisa. Iri basa rinonakidza kwazvo nekuti tinogona kuwedzera zvakakwana mabasa kana kuvabvisa nemitsetse miviri chete yekodhi. Muchiitiko chekuda kuve ne server isu tinofanirwa kuvhura iyo terminal uye tinyore zvinotevera:
Asi chinowanzoitika ndechekuti isu tinongoda kuisa Apache Server, mune ino kesi isu tinofanirwa kusuma inotevera mitsara kuti tiise iyo:
Ndiko kureruka kwatingaita kuva neApache Server mune chero vhezheni yeFedora, zvese zve desktop uye zvinwiwa zviri pamutemo, asi pane dambudziko. Fedora ine default Firewall inogoneswa iyo inovhara kushandiswa kweApache Server. Izvi zvinogona kugadziriswa nekuudza iyo Firewall iyo mafaera kuti irege kumhanya. Kuti uite izvi, zvakare kuburikidza neyekuraira console, tinonyora zvinotevera:
Uye kana tichida kuti shanduko dzive dzechigarire, tinofanirwa kunyora zvinotevera:
Uye neizvi isu hatina chete kuva neApache Server yakaiswa mune yedu Fedora asi isu zvakare Tichaita kuti igadziriswe kuitira kuti kushandiswa kwayo kuve kwakachengeteka uye hauna dambudziko nemakomba ekuchengetedza paunenge uchigadzira sevha mashandisirwo kana chero epamberi budiriro zvinonakidza, handiti?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Maitiro ekuisa Apache Server pane Fedora